वास्तुशास्त्र : घरमा यी बिरुवा रोप्नु भयो भने हुनेछ फलिफाप ! - Reports Nepal
तपाइँको घरमा भएका बोटबिरुवाको कारणले पनि तपाईमा सकारात्मक उर्जा उत्पन्न हुन्छ ।
त्यतिमात्रै होइन तपाइँको घरमा भएका बिरुवाका कारण तपाईले कति कमाउनुहुन्छ ? वा तपाईको व्यापार व्यवसायमा यी विरुवाले के कस्ता फाइदा वा घाटा गर्छन् ? त्यो पनि अर्थ राख्दछ ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार केही त्यस्ता रूख र बोटहरू छन् जसको सही प्रयोगले तपाइँको जीवनमा फलिफाप हुनेछ ।
मनी प्लान्टः मनी प्लान्टका बोटहरू लामो समयदेखि सबैका लागि मनपर्दो बोटका रूपमा देखिएका छन् । यो अति नै सुन्दर र कोमल हुन्छ । यसले वातावरणलाई शुद्ध पार्ने काम गर्दछ । मनी प्लान्टलाई इग्निस कोणमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । यस दिशामा यो प्लान्ट राम्रो फुल्छ पनि । घरमा मनी पलान्टका बिरूवाहरू राख्ने गर्नाले तपाईंको घरमा पैसाको कहिल्लै पनि कमी हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
मनी ट्रीः अचेल अनलाईन मार्केटिङबाट पनि अत्याधिक बेचिने ट्री हो मनी ट्री । पैसाको बोट नामले चिनिने यो बिरुवा आजकल धेरै लोकप्रिय भइरहेको छ । चिनियाँ फेङ्गशुई र वास्तुमा धेरै विशेष मानिने यसको मूल अमेरिकामा छ ।
शमी रूखः वास्तु हिसाबले यस रुख तपाईको घर वरपर हुनु आवश्यक छ । यो धेरै विशेष मानिन्छ । शमी रूख शंकरजीको सबैभन्दा प्रिय मानिन्छ । यस्तो विश्वास गरिन्छ कि घरमा शमी रूख रोप्नाले सम्पूर्ण गरिबी हटेर जान्छ। पैसाको अभावका कारण तपाईको घरमा काम रोकिने अवस्था आउँदैन । यदी यो रुख रोप्न समस्या छ भने प्रत्येक सोमबार शिवलाई शमीको फूल र पातहरू चढाउँदा तपाईंको घरमा खुशी र समृद्धि आउँछ ।
अश्वगन्धाः औषधिय गुणले भरिपूर्ण यो वनस्पति तपाईको घरमा रोप्नुभएको छ रु वास्त्शास्त्र मान्नुहुन्छ भने यो विरुवाले तपाईको परिवारमा फलिफाप गराउँछ । घरमा अश्वगन्धाको रूख रोप्नाले सुख शान्ति र समृद्धि आउँछ । विज्ञानले प्रमाण्ति गरेको छ यसका धेरै अन्य फाइदाहरू रहेका छन् । अश्वगन्धाका फूलहरूलाई पनि पूजाआजामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। विकिपिडियाले अश्वगन्धाबारे लेखेको छ ‘अश्वगन्धा उष्ण क्षेत्रमा पाइने बुट्यान वर्गको वनस्पति हो । यसको बोट तीनदेखि पाँच फिट अग्लो हुन्छ । झण्डै आँक जस्तो देखिने अश्वगन्धाको पात सेता झुसले ढाकेको ४ देखि ६ इन्च लामो हुन्छ ।
श्वेटार्कः नेपाली समाजमा अलि नौलो नाम हो श्वेटार्क । छिटफूट रुपमा कसैको घरमा देखिएपनि प्रायजसो नर्सरीमा यो विरुवा पाईँदैन । गणेशको प्रतीक मानिने यो दुधको बोट हो र यसलाई राम्रो भाग्यको सूचक पनि मानिन्छ । तर वास्तुशास्त्रले भनेको छ कि कुनै सेतो पदार्थ निस्कने बिरुवा घरमा राख्नु हुँदैन । त्यसैले तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्न सक्नुहुन्छ ।एजेन्सी